Piano Solo - Magic Dream tiles game4APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စန္ဒယားတစ်ကိုယ်တော် - မှော်အိပ်မက်ဂိမ်းထောင့်ကွက် 4
တစ်ကိုယ်တော်စန္ဒရား - မှော်အိပ်မက်ဂိမ်း4APK ကိုထောင့်ကွက်
1000 ထူးခြားတဲ့စန်ဒယားသီချင်းတွေကိုကျော်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစန္ဒယားဇယား Play နှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်
ဂီတခံစားရနှင့်စန္ဒရားအုပ်ကြွပ်ထိပုတ်ပါ။ အဆိုပါသီချင်းဆိုအညီအနက်ရောင်အုပ်ကြွပ်ကိုအသာပုတ်နှင့်မဆို tile ကိုလက်လွတ်မကြဘူး! သငျသညျကိုဘယ်လိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်ကစားနိုင်ပါတယ်သက်သေပြဖို့!
•တသာနှစ်သစ်ကူးတိုက်ပွဲ Mode ကို: ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာစိန်ခေါ်ပြပွဲ - တစန်ဒရားအွန်လိုင်းစစ်တိုက်ရာတွင် "မသနားတျောမူပါ"! အဆိုပါဆုရှင်ကအားလုံးကိုကြာ!
•သင်ကိုချစ်ကိုကစွန့်ခွာမည်သည့်သီချင်းများတောင်းဆိုခြင်း။ ငါတို့ကဲ့သို့အစာရှောင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်, လက်ျာဘက်အသစ်ကတစ်နှစ် 2019 ၌သငျဖို့ကရှာဖွေဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ဒါကြောင့်မိသားစု & သူငယ်ချင်းများကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်စန္ဒရားအနက်ရောင် tile ကိုဂိမ်းဖြစ်လာစေသည်ထားတဲ့•တင့်တယ်စန္ဒရားအဖြူအုပ်ကြွပ်ဂီတ, ။ သင်အကြိုက်ဆုံးစန္ဒယားအဖြူဂီတကြွပ်သီချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ပဉ္စလက်စန်ဒရားဂီတအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းရည်ကိုပြသသင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူစိန်ခေါ်။
•သခင်, ကစားရန်ရိုးရှင်းသောခက်ခဲ - အစဉ်အဆက်အခက်ခဲဆုံးဂိမ်းထဲကတစ်ခု။ ဤအမြန်နှုန်းမြင့်မှော်စန္ဒရားဂိမ်းထဲမှာလူအပေါင်းတို့သည်မှော် tile ကို Catching 2018 အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောတိုက်ပွဲ Mode ကိုအတွက်ရတာမလွယ်ပါ!
•ကာမဲန်, သားမွေး Elise, Waltz, D ကိုအတွက်ကို Canon, လရောင် Sonata က The Swan, တာကမတ်လ, လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်မှသီချင်းများနှင့် 200 ကွဲပြားခြားနားသောဂန္ထဝင်သီချင်းတွေကိုကွဲပြားခြားနားသည်သင်၏ဂီတသဘောသဘာဝမှ
• Awesome ကိုဂိမ်းဒီဇိုင်းနှင့်မှော်စန္ဒရားဂိမ်း 2018 များအတွက်ဂရပ်ဖစ်။ သငျသညျအဘယ်သူ၏စည်းချက်မဆိုစန္ဒရားဂီတကိုနှစ်သက်မှုအတွက်စုံလင်သည်စျေးကြီးလောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဖြင့်လုပ်သောအစစ်အမှန်ဇိမ်ခံမှော်စန်ဒရား, ကစားနေကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
• Sebastian Bach, ဖရန့် Liszt, Debussy, Rachmaninoff, Mendelssohn, Beethoven, Chopin, မိုဇတ်, Schubert, Tchaikovsky နှင့်မကြာခဏ updated လူကြိုက်အများဆုံးစန္ဒယားသီချင်းများ, ဂန္သီချင်းတွေကိုထံမှကွဲပြားခြားနား။
ယခုဒီဂိမ်းကိုထုတ်ကြိုးစားပါနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစိန်ခေါ်! ဤသည်မြန်နှုန်း 2019 သင်စိတ်ကူးနိုင်ထက်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်စန္ဒရားဂိမ်းများကိုနှိပ်။
အခမဲ့အဘို့ယခုစမ်းကြည့်ပါ! ယနေ့ Download!
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? support@amanotes.com အီးမေးလ်ပို့ပါ
- In-ဂိမ်း UI ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမ
- Update ကိုပရီမီယံသီချင်းများ
- တချို့ကမိုင်းနားချို့ယွင်းမှုများ Fix
စန္ဒယားတစ်ကိုယ်တော် - မှော်အိပ်မက်ဂိမ်းထောင့်ကွက် 4
42.24 ကို MB
Stagelight App ကို ...
Songily - ၏တဦးတည်း ...
SongPop2- ဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲ ...